ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲ - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
ရေပန်းခေါင်းတွင် ရေအနည်းငယ်ထွက်ရှိပြီး booster pump သို့မဟုတ် booster function ပါရှိသော ရေချိုးခေါင်းခေါင်းကို ၎င်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ရေဝင်ပေါက် အဆို့ရှင်သည် အလွန်သေးငယ်ပါက၊ ရေပန်းခေါင်းတွင် ရေထွက်ပေါက် အနည်းငယ်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင် ရေဝင်ပေါက် အဆို့ရှင်ကို ပိုမိုကြီးမားစွာ ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ရေချိုးခေါင်း၏ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းကြောင့် ရေပန်းခေါင်းအား သေးငယ်သော ရေထွက်ပေါက်ကို ဖြစ်စေသောကြောင့် ကြည်လင်နေစေရန် သေချာစေပါ။
ရေချိုးခေါင်းကို ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်းဘဝအတွေ့အကြုံအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရေချိုးခေါင်းမှ ရေထွက်အား နည်းပါက အကြောင်းရင်းကို အချိန်မီ ရှာဖွေပြီးမှ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရေချိုးခေါင်း၏ ဖိအားကို မည်ကဲ့သို့ တိုးစေသနည်း ၊ ရေချိုးခေါင်းအား မည်ကဲ့သို့ သေးငယ်သည်ကို သင်သိပါသလား။ ကဲ အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။
ä¸€။ ရေချိုးခေါင်းကို ဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲ။
äºŒ။ ရေချိုးခေါင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ရေလေးတွေက ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
1. ရေပန်းခေါင်း၏ ရေထွက်အား သေးငယ်လာပါက၊ လူတိုင်း၏ ရေထုထည် လျော့နည်းသွားခြင်း ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် သင့်အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် ဦးစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် ရေပိုက်ပြဿနာရှိနေသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကို မထိခိုက်စေရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရေကုမ္ပဏီသို့ အချိန်မီဆက်သွယ်သင့်သည်။
2. သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်းခေါင်းမှ ရေထွက်ရှိမှု သေးငယ်ပါက၊ ရေအပူပေးစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရေဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်ကို ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အနည်းငယ်ဖွင့်ထားလျှင် ရေစီးကြောင်းကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ရေဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီး အမြင့်ဆုံးအထိဖွင့်ပါ။ မြင့်မားသောကြမ်းပြင်တွင်နေထိုင်သောအသုံးပြုသူများသည် booster pump တပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
3. ဝယ်ယူထားသော ရေချိုးခေါင်း၏ အရည်အသွေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါက အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေကာ အဆစ်များ မညီမညာဖြစ်စေကာ ရေနည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ တပ်ဆင်မှုတွင် ပြဿနာရှိပါက၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပြဿနာများကို အထူးဂရုပြုပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများကို အချိန်မီဆက်သွယ်ပါ။
ရေချိုးခေါင်းရဲ့ ဖိအားကို မြှင့်တင်နည်းနဲ့ ရေချိုးခေါင်းခေါင်းက ဘယ်လောက်သေးငယ်သလဲဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မင်းသဘောပေါက်သလား? ရေချိုးခေါင်းမှာ ရေနည်းနည်းပါရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကို သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ နောက်ပိုင်းကာလမှာ ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သေချာစေဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆေးကို ညွှန်းပေးရပါမယ်။
လွန်ခဲ့သော:Shower Head တပ်ဆင်နည်း
နောက်တစ်ခု:ငါတို့က ဘယ်လို ကုမ္ပဏီမျိုးလဲ။